Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha "Encoder Modulator" | Shiinaha Encoder Modulator Factory
ZJ3544I Iskuduwaha Encoder
ZJ3544I waa qalab isdhexgal xirfad sare leh oo ay kujiraan codbixinta, isku dhufashada, xoqitaanka iyo qaabeynta. Waxay taageertaa 8/12/16/20/24 HDMI talooyin, hal DVB-C (ATSC optional) aqbasho tuner iyo ugu badnaan 512 IP talooyin leh dekedda Data1 (GE). Waxa kale oo ay taageertaa DVB-C RF oo lala baxo 16 xamuul oo aan jaarka ahayn ama DVB-T / ATSC RF oo lala baxo 8 sidayaal aan jaarka ahayn, ama ISDB-T RF oo lala soo baxo 6 sidayaal aan u dhaweyn, waxayna taageertaa 16/8/6 MPTS sida muraayadda 16/8/6 sidayaal oo loo maro dekedda wax soo saarka ee Data2 (GE). Muuqaalkan buuxa ...
ZJ3542U 4K Module Dejiye
Dulucda ZJ3542U waa qaab-hawleed sare oo ah 4K Encoder modulator. Waxay isku xireysaa codeyn (H.265 / HEVC iyo H.264 / AVC), isku dhufashada iyo qaabeynta howlaha hal kiis oo 1U caadi ah. Waxay taageertaa laba HDMI (2.0) kanaalka UHD ee gelinta calaamadaha (kulaylka kulul) ee loogu talagalay codeynta, iyo sidoo kale 2 ASI & 32 IP talooyin loogu talagalay remux. Si loo xoojiyo awoodda gaadiidka, waxay isku darsameysaa 1 soosaarayaasha DVB-C / T oo leh hal deked RF. Waxay sidoo kale ku qalabeysan tahay 4 dekedo ASI ah si ay u muraayad u bixiso xambaaraha RF iyo dekedda IP si loo soo saaro TS 1 * MPTS. Muuqaalka ...
ZJ3542I Iskuduwaha Encoder
Kani waa qalab is-dhexgal sare oo xirfadle ah oo ay ka mid yihiin habayn, isku dhufasho, xoqitaan iyo habeyn. Waxay taageertaa 4/8/12 HDMI aqbasho, hal aqbasho tuner DVB-C iyo aqbasho 128 IP leh Data1 (GE) iyo dekedda Data2 (FE). Waxa kale oo ay taageertaa DVB-C RF oo la socota 4 wadata oo isku xigta, iyo taageerida dekedda wax soo saarka ee Data1 (GE) si ay u taageerto 4 MPTS dibedda. Qalabkan oo buuxa wuxuu ka dhigayaa mid ku habboon nidaamka dhamaadka madaxa CATV, waana xulasho caqli badan oo loogu talagalay nidaamka TV-ga hoteelka, nidaamka madadaalada ee bar-isboortiga, isbitaalka, ...
ZJ3542H / HA Qalabka wax lagu beddelo
Dulmarka guud ee alaabada ZJ3542H / HA encoder modulator waa aalad isdhexgal xirfadeed sare leh oo ay ka mid tahay habaynteeda, isku dhufashada, xoqitaanka iyo qaabaynta. Waxay taageertaa 8 illaa 24 soo-gelinta CVBS, hal DVB-C / T / (T) / ISDBT aqbasho tuner iyo 128 IP gelinta loo maro Data1 (GE) iyo dekedda Data2 (FE). Waxa kale oo ay taageertaa DVB-C / T RF oo lala baxo 4 oo ku dhaw xambaarsan, waxayna taageertaa 4 MPTS ilaa Data1 (GE). Qalabkan waxqabadka buuxa wuxuu ka dhigayaa mid ku habboon nidaamka dhammaadka madaxa ee CATV, waana xulasho caqli badan oo loogu talagalay nidaamka TV-ga hoteelka ...
ZJ3526SA waa waxqabad sare iyo modulator cod-bixiyaha oo kharash-ku-ool ah. Waxay leedahay 16 CVBS talooyin ay la socoto MPEG4 AVC / H.264 Video encoding iyo 1 DVB-C tuner aqbasho iyo 8 sideyaal aan u dhowayn wax soo saar leh isku dhufasho, isku shaandhayn iyo qaabaynta DVB-C oo lagu daray. Waxay taageertaa ugu badnaan 256 IP input iyo IP (8MPTS) wax soo saar iyada oo loo marayo dekedda Xogta. ZJ3526SA sidoo kale waxaa lagu gartaa heer isku dhafan, waxqabad sare iyo qiimo jaban. Tani waa mid aad ula jaan qaadi karta nidaamka warfaafinta jiilka cusub ee CATV. Astaamaha Muhiimka ah ● 16 ...
ZJ3524 DVB-T SD & HD Encoder & Modulator leh USB
ZJ3524 HD & SD encoder & modulator waxaa loogu talagalay iyada oo ku saleysan elektaroniga elektaroonigga ah kaas oo u oggolaanaya talooyinka maqalka / muuqaalka fiidiyowga ee qaybinta TV-yada oo ay la socdaan codsiyada madadaalada guriga, xakamaynta ilaalada, Hoteelka Dijital Dijital ah, dukaamada iwm. Nidaamaynta AVC / H.264 iyo qaabaynta si loogu beddelo calaamadaha maqalka / muuqaalka ee loo maro DVB-T RF dibedda. Isha ishaaradu waxay ka imaan kartaa STB, qalabka wax lagu duubo ee dayax gacmeedka, kaamirooyinka telefishanka ee xiran iyo anteenada iwm.
HDMI DVB-C / DVB-T / ATSC / ISDB-T Encoder & Modulator DVB-C / T / ATSC / ISDB-T RF oo hal aalad ah, Qaabdhismeedka Isbadalka firfircoon ee Taageerada CC (Qormo xiran), EIA 608 Taageero LCN Qiimo Jaban Guud Faahfaahin ZJ3522C HD encoder & modulator waxaa loogu talagalay ku saleysan elektaroniga elektarooniga ah kaas oo u oggolaanaya talooyinka maqalka / muuqaalka fiidiyowga ee qaybinta TV-yada oo ay la socdaan codsiyada madadaalada guriga, xakamaynta ilaalada, Hoteellada Dijital Dijital ah, dukaamada iwm. iyo qaabka ...